Help:Extension:UniversalLanguageSelector/Input methods/my - MediaWiki
၁ Enabling and Disabling the input method
၂ Selecting an input method
၃ Disabling the tool for your user account
၄ Available input methods
၄.၁ Non-Indic scripts
၄.၁.၁ အမ်ဟာရစ်ခ် [am]
၄.၁.၂ အာရဗီ [ar]
၄.၁.၃ အာမေးနီးယား [hy]
၄.၁.၄ အနောက် ဘဲလိုချီ [bgn]
၄.၁.၅ Southern Balochi [bcc]
၄.၁.၆ ဘီလာရုစ် [be]
၄.၁.၇ Berber [ber]
၄.၁.၈ တရုတ် [zh]
၄.၁.၉ ချူဗက်ရှ် [cv]
၄.၁.၁၀ ခရိုအေးရှား [hr]
၄.၁.၁၁ Cyrillic Generic
၄.၁.၁၂ ဒီဗာဟီ [dv]
၄.၁.၁၃ Dinka [din]
၄.၁.၁၄ အီဝီ [ee]
၄.၁.၁၅ ဒိန်းမတ် [da]
၄.၁.၁၆ Khowar [khw]
၄.၁.၁၇ အင်္ဂလိပ် [en]
၄.၁.၁၈ အက်စ်ပရန်တို [eo]
၄.၁.၁၉ ဖာရို [fo]
၄.၁.၂၀ ဖင်လန် [fi]
၄.၁.၂၁ ဖော်န် [fon]
၄.၁.၂၂ ဂါ [gaa]
၄.၁.၂၃ ဂျာမန် [de]
၄.၁.၂၄ ဂျော်ဂျီယာ [ka]
၄.၁.၂၅ ဂရိ [el]
၄.၁.၂၆ ဟာဥစာ [ha]
၄.၁.၂၇ ဟီးဘရူး [he]
၄.၁.၂၈ အိုက်စ်လန် [is]
၄.၁.၂၉ အစ္ဂဘို [ig]
၄.၁.၃၀ ကာဇာချ [kk]
၄.၁.၃၁ ကဒ် [ku]
၄.၁.၃၂ လာအို [lo]
၄.၁.၃၃ မြန်မာဘာသာ [my]
၄.၁.၃၄ မြောက် ဆာမိ [se]
၄.၁.၃၅ နော်ဝေး [no]
၄.၁.၃၆ ရုရှ [ru]
၄.၁.၃၇ ဆလိုဗက် [sk]
၄.၁.၃၈ ဆွီဒင် [sv]
၄.၁.၃၉ ဆခါ [sah]
၄.၁.၄၀ ဆားဘီးယား [sr]
၄.၁.၄၁ ထိုင်း [th]
၄.၁.၄၂ အူမူရတ် [udm]
၄.၁.၄၃ ဝီဂါ [ug]
၄.၁.၄၄ ယူကရိန်း [uk]
၄.၁.၄၅ ဥဇဘတ် [uz]
၄.၂ Indic scripts
၄.၂.၁ အာသံ [as]
၄.၂.၂ ဘင်္ဂါလီ [bn]
၄.၂.၃ ဗိုဒို [brx]
၄.၂.၄ Dogri [doi]
၄.၂.၅ ဟိန်ဒူ [hi]
၄.၂.၆ ဂူဂျာရသီ [gu]
၄.၂.၇ ဂျာဗား [jv]
၄.၂.၈ ကန်နာဒါ [kn]
၄.၂.၉ ကက်ရှ်မီးယား [ks]
၄.၂.၁၀ Goan Konkani [gom]
၄.၂.၁၁ မိုင်သီလီ [mai]
၄.၂.၁၂ မလေယာလမ် [ml]
၄.၂.၁၃ မနိပူရ [mni]
၄.၂.၁၄ မာရသီ [mr]
၄.၂.၁၅ နီပေါ [ne]
၄.၂.၁၆ အိုရီရာ [or]
၄.၂.၁၇ ပန်ချာပီ [pa]
၄.၂.၁၈ သင်္သကရိုက် [sa]
၄.၂.၁၉ ဆန်တာလီ [sat]
၄.၂.၂၀ စင်ဒီ [sd]
၄.၂.၂၁ စင်ဟာလာ [si]
၄.၂.၂၂ တမီးလ် [ta]
၄.၂.၂၃ တီလီဂူ [te]
၄.၂.၂၄ အူရ်ဒူ [ur]
၄.၂.၂၅ ယိုရူဘာ [yo]
၅ New input methods and translations
၆ How to report issues
If the Input tool is enabled, you will seeasmall keyboard icon next to the text area. To enable the tool, you can use the keyboard shortcut Control+M. Or select the option "ထည့်သွင်းကိရိယာများ ဖွင့်ရန်" at the bottom of the menu displayed when the keyboard icon is clicked or through ULS language panel .
From the sidebar: by clicking on the "ထည့်သွင်းကိရိယာများ ပိတ်ရန်" button within the input settings option in the Language Settings panel
From the Keyboard menu: by clicking on "ထည့်သွင်းကိရိယာများ ပိတ်ရန်" from the keyboard menu that is displayed when the user clicks on the keyboard icon from an input field (like the search field)
အနောက် ဘဲလိုချီ [bgn]
မြောက် ဆာမိ [se]
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Help:Extension:UniversalLanguageSelector/Input_methods/my&oldid=3273009"
This page was last edited on 12 June 2019, at 21:30.